Madaxweynaha P/Land oo qorshe cajiib ah ka damacsan xafladiisa caleemo saarka “Maxaa dhacaya?” | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Madaxweynaha P/Land oo qorshe cajiib ah ka damacsan xafladiisa caleemo saarka “Maxaa...
Wararka aan ka heleyno magaalada Garowe ayaa sheegaya in halkaasi ay ka socoto qaban qaabadii ugu dambeysay ee loogu jiro xaflada caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Madaxweynayaashii hore ee dalka SHariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa lagu casuumay inay ka qeyb galaan munaasadda sida ilo xog ah ay u sheegeen Badweyn Online.
Previous articleMadax hore, Mucaaradka iyo Maamul goboleedyada oo lagu casuumay caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Puntland
Next articleMadaxtooyada Villa Somalia oo baadi goobeysa wiil Shimbir badbaadiyay
Amar ay wadajir u soo rogeen Puntland iyo Galmudug oo ka dhaqan galay Gaalkacyo
DHAGEYSO: Ma Dhabaa In Xilka Qaadis Sharci Ah Lagu Sameeyey Madaxweyne Xaaf?
XOG: Abu Mansuur Rooboow Oo Dhawaan Dal Carbeed Xabsiga Kasii Deynayo
Nooc cusub oo amni daro ah oo kusoo kordhay Muqdisho&shacabka oga fal celiyay si aan la Fileyn
Ganacsatada kaluunka ee Muqdisho oo ka cabanaya hoos u dhac soo wajahay kalluunkii ay soo saarijireen!! (Daawo Video )
ERITREA oo ka hadashay warar sheegaya in ciidamo ay usoo direyso Muqdisho
Dowladda Saudi Arabia oo war cusub kasoo saartay dhoofka xoolaha Somalia
SAWIRRO: DFS oo maanta soo bandhigtay Hogaamiyaal Sare ka tirsan Daacish, Maxkamadna lasoo taagay…
Yaa ka nasiib wanaagsan gabar shukaansatay ra’isul wasaare Carbeed oo 16 milyan oo siiyay